Warar - Carwo
Shirkadda Winby shumaca waa shirkad xirfadle ah oo soosaarta shumacyo udgoon, dhalooyinka shumaca, shumaca tiirarka iyo shumaca farshaxanka. Waxaan ka soo qeyb galnay Carwada Canton sanado badan, waxaana soo jiidanay macaamiil aad iyo aad u tiro badan oo ka kala yimid dalal badan oo adduunka ah. Illaa iyo hadda, wali waxaan ilaalinaa xiriir wada shaqeyn oo waara sababo la xiriira qiimaheena high tayada sare leh iyo adeega ugu fiican Macaamiil badan ayaa na siiyay qiimeyn sare oo ku saabsan alaabtayada.
Carwadii Canton, shirkadeenu waxay soo jiidatay shumacyo badan oo jecel adduunka oo dhan, waxayna aad u xiiseynayaan shumacyadayada dhalada ah ee carafta leh. Waxaan ku siineynaa shumacyo qaabab kala duwan oo koob ah, oo ay ku jiraan tiirka koob galaaska, qaabka Yankee, koob laba jibbaaran, weelka daasadda, weelka wax lagu keydiyo. Iyo waliba shumacyo badan oo farshaxan ah. Dabcan, iyaguna waxay aad u xiiseynayaan adeegyadeena habeysan, maxaa yeelay waxay ku daabacan karaan qoraalkooda ay jecelyihiin ama sawirada shumacyada ay jecel yihiin.
Sababta oo ah tayada wax soo saarkeena iyo adeegga macaamiisha, waxaan ku guuleysanay macaamiil badan carwadii Canton. Tusaale ahaan, mid ka mid ah macaamiisheena ayaa email noo soo diray: Waxaan jeclahay inaan kula shaqeeyo. Adeeggaagu waa midka ugu wanaagsan ee aan abid la kulmo. Sababta oo ah adeeggaaga ugu fiican, ma jiraan wax laga walwalo. Mahad badan.
Faallo kale oo wanaagsan, mid ka mid ah macaamiisheena oo ka socda Boqortooyada Midowday ayaa noo soo diray emayl: Runtii waxaan rabaa inaan isticmaalo shirkaddaada maadaama aan aad ula socdo inaad hadda samaysay laba wareeg oo tijaabooyinkeenna ah oo lacag la'aan ah Natiijo ahaan, waxaan ku faraxsanahay inaan bixinno si aan u hubinno in alaabtayada loo sameeyo tayada ugu sareysa oo ay diyaar ugu yihiin inay suuqgeeyaan sida ugu dhakhsaha badan.
Qof macaamil ah oo reer Japan ah ayaa yidhi: Shumacyo tayo wanaagsan leh. Si taxaddar leh loo buuxiyey oo loo geeyey waqtigii loogu talagalay. Adeeggu wuxuu ahaa mid deg deg ah oo saaxiibtinimo leh. Mar labaad ayaan dalban lahaa
Waa kuwan qaar ka mid ah sawirrada macaamiisheenna si aad u tixraacdo.